Erdogan: waan iska difaaceynaa weerarada nooga imaanaya Syria - Bandhiga Media
Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray maktab cusub oo laga hirgalyey xarunta dhalinyarada Gobalka
Erdogan: waan iska difaaceynaa weerarada nooga imaanaya Syria
Hussein Banjaani February 12, 2020
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa balanqaaday in ay beegsan doonaan xarumaha ciidanka Suuriya hadii waxyeelo loo geesto Milatariga Turkiga ee ku sugan gobolka Idlib.
Mr Erdogan oo ka hadlayay arbacada maanta ah xarunta baarlamaanka ee magaalada Ankara ayaa tilmaamay in ciidankooda ay qaadi doonaan dabayaaqada bishan February howlgalo ka dhan ah kuwa Syria ee ku dhow Fariisimahooda.
Waan sameyn doonaa waxwaliba oo suuragal ka dhigi kara ha ahaato ciidanka lugta ama diyaaradaha dagaalka ayuu yiri madaxweynaha Turkiga.
Sanadkii 2018 – kii ayaa shir ka dhacay magaalada Sochi ee dalka Ruushka ayaa xukuumadaha Ankara, Moscow iyo Dimishiq isku raaceen in gobolka Idlib laga sameeyo aag ka caagan colaada oo marti galin kara barakacayaasha Gudaha.
Qorshahan ayaa ujeedkiisu ahaa ka hortaga qaxooti cusub oo ka gudba xadka labada wadan maadaama Turkiga uu la ciirciirayo qaxooti ka badan sadax malyan oo kasoo cararay colaada gudaha Syria.
Erdogan ayaa sheegay in 13 askari oo ka tirsan ciidankooda siyaabo kala duwan loogu dilay gobolka Idlib kadib weerar uga yimid Milatariga maamulka Bashar Al-Assad.
Ugu danbeyn Erdogan ayaa balan qaaday in ay soo ridi doonaan diyaaradaha dagaalka Syria hadii ay soo dulmaraan fariisimaha ciidanka Turkiga.
12-kii bishii January ayay aheyd markii dagaal xoogan oo u dhaxeeya milatariga Syria iyo maleeshiyada mucaarada uu ka qarxay gobolka Idlib.
Mareykanka iyo Jubbaland Oo Ka Wadahadlay Xaaladda Gobolka Gedo
Mucaaradka Liibiya oo joojiyay duulimaadyada diyaaradaha sida QM